कलियुगका कुरा: June 2010
कान्तिपुरले पनि वार्ता सिधै दिल्लीसँ गर्न पर्ने भएछ...
लउ कान्तिपुर/काठमाण्डु पोस्ट छाप्न भनेर क्यानाडा र दक्षिण कोरियाबाट ल्याउन लाको कागज त भारतले कोलकता बन्दरगाहामा रोक्दिएछ। माधव नेपालको राजिनामा मागेको सम्पादकीय अहिलेसम्म तीन चोटी जति लेखेको भर कागज रोक्दिएको त हैन होला क्यारे....प्रचण्डले अस्तिनै वार्ता मालिकसँग भनेका थिए। कान्तिपुरले पनि अब वार्ता दिल्लीसँगै गर्न पर्ला जस्तो भछ। दुताबासमा भनेनि,कोलकतामा भनेनि,प्रधानमन्त्री नेपाललाई भने पनि केही भएन रे त ...
हन महिला सभासदहरु आजभोलि के मा बिजी!
संविधानसभाको म्याद सकिने दिन राती एक डेढ घन्टा महिला सभासदहरुले म्याद थपको माग गर्दै खुब नारा लाथे। आजभोलि कता लाए हउ तिन्हरु..संविधान बनाउने तिर त केही प्रगति भा जस्तो छैन। फेरि कतै नारा लाको देख्या सुन्या नि छैन। एउटा कार्यक्रम तिन्लाई नै बोलार गर्न परो...
लउ भ्रष्टाचाराँ चाहिँ रेकर्ड राखेछन्...
नाम त राखेछन् है नेता र कर्मचारी मिलेर। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धि विश्व र्‍याकिङाँ नेपाल १४३ औं स्थानमा रहेछ। पोहोर भन्दा पाँचस्थान मात्र तल झर्‍या रे। सार्कआँ त नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश गराइदेछन् नेता-कर्मचारीले..गरो गरो। सार्कआँ मात्र किन गर्या विश्वमै गरै पनि हुन्छ नि।
केही न केहीमा त रेकर्ड राख्नै परो नि, गतिला कुरा नसके यस्तैमा राखो। फुटबलाँ नि १६१ औं रेकर्ड छ क्या रे..(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
फुटबल हेर्न पाइएन भने त... :)-
वर्ल्ड कपमा पुगेर नेपालीहरु खेल्दिएर हामीलाई गौरन्वानित गराउनु त कहाँ हो कहाँ,लउ खेलाडीले खेल्न सकेनन् रे। हाम्रै जुनिमा देशले वर्ल्डकप आयोजना गर्दिएर हामीलाई खुशीले गदगद बनाउनु त परैको कुरा भो। झन् यो बेलाँ पनि लोडसेडिङ गर्देर वर्ल्डकप फुटबल हेर्न दिएनौ भनी त...त... त..... के गर्छौं थाहा छ???
हुनेखानेले जेनेटर/इन्भर्टर राखेर नभए रेष्टुरेन्ट तिर गर हेर्छन। म जस्तो कुन साथीकहाँ आज लोडसेडिङ छैन भन्दै फोन गर्न थाल्छन्। कोही कोही त रिसाएर विद्युत प्राधिकरणका अफिसाँ ढुङ्गा हान्छन्... (उहिले उहिले जस्तै)
नेताहरु जहाँ पायो त्यही गर क्या दुःख पाइयो यार...
धेरै हास्नु हुँदैन रुनुपर्छ भन्थे। साँच्चै नै रैछ क्यारे। लामो समयपछि साझा सवालआँ झलनाथ खनाल आउन तयार भाथे। आजै श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै भाषण गर्न गाको एउटा दाँत अस्पतालको मन्च ट लडेछन्। थ्याङ्कस गड धन्न दाँत भाचिएनछ खुट्टाँ मात्र चोट लागेछ। नेताहरु मञ्च पाएपछि जहाँ पायो त्यही नजानु,पुरा गर्न नसक्ने कुरा नबोल्नु भनेको मान्दैनन्। उद्ंघाटन,विमोचन,भाषण भनेपछि हुरुक्कै। अझै विदेशीको रात्रिभोज,दिवाभोज,जलपान,जाँडपान पनि दुताबासैमा गएर डकार्दिन्छन्।
तर हाम्रो चाहिँ विजोग भो। पर्सी कार्यक्रम बजाउनुपर्ने खनाल घाइते भएपछि आज कार्यक्रम रेकर्ड गर्न सकिएन। रेकर्डका लागि भनेर बोलाइएका सहभागी सबैलाई अन्तिम समयमा लउ भनेर माफी मागियो। तर हलको पैसा, खाजाको लागि अर्डर गरेको,प्याक भइसक्या रैछ त्यो पैसा,सबै खेर जाने भो। सबभन्दा टेन्सन त फेरि अर्को नेता खोज्नुपरो।
गाडी चालक नै निदाएपछि...
गर्मी बढेर हो कि अल्छि भर हो। बसाँ अफिस आउँदै थिए। कलकीको जाममा माइक्रोबस चालक निदाउँदै,झकझकाउँदै माइक्रोबस चलाइरहेका थिए। बिचराले कतै पुगेर दुर्घटनामा त पारेनन् होला। विश्वकप सुरु नहुँदै त त्यस्तो हालत छ। राति राति विश्वकप फुटबल हेर्ने ड्राइभर परे भने त यो गर्मीआँ पब्लिक गाडीअट हिड्न नि डरै छ...
साझा सवालमा झलनाथ खनाल...
'साझा सवाल'आँ यसपाली झलनाथ खनाललाई खुइल्याउने कुरा गर्दैछन् साथीभाइ। तपाइसँग नि केही खतरै तथ्यमा आधारित प्रश्न भए लेख्दिम्,बा तपाइकै‍ प्रश्नले देशलाई निकास निकाल्ने उत्तर पो दिन्छन् कि काम्रेडले। के गर्ने यहाँ जागिर कै छ चिन्ता हाँसेर मात्रै नहुने...
राजेश हमाल ४६ वर्षाँ लागे...
यो आशा भन्ने कुरा नभा देखी नि मान्छेहरु खतमै हुन्थे होला। आजट ४६ वर्ष पुगेका'महानायक'राजेश हमाल नि अझै बिहे गर्ने आशा नै छन् रे। कृष्णप्रसाद भट्टराई नि बिहे हुन्छ भन्ने आशै आशाँ बुढा भाका हुन् कि। बिहेको कुरा पक्का नगरे नि राजेश हमालले आगुम एउटा फिल्म निर्देशन गर्ने चाहिँ पक्का गरेका छन् है..पैसा भाको भए प्रोड्युसर हुने चान्स नि हुन सक्छ क्यारे...
पत्रिके प्रधानमन्त्रीहरुको लिस्टाँ...
अस्ति नै प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति भनेर खुब गिज्याथे। अब पत्रिके प्रधानमन्त्री भनेर धेरैलाई नै भन्न पाइएला जस्तो छ। माधव काम्रेडले राजिनामा दिने हु्न कि होइनन् कुन्नि!तर पत्रिकाले एकपछि अर्को गरी प्रधानमन्त्री बनाइदिइराछन् त। बाबुराम भट्टराई,रामचन्द्र पौडेल,शेरबहादुर देउवा,सुशिल कोइराला,के पी ओली,झलनाथ खनाल,प्रचण्डै,अनि सिके लालले लेख्देर अस्ति नै सुप्रभा घिमिरेलाई'पत्रिके'प्रधानमन्त्री बनाइदिईभ्याथे...कतिलाई यही पत्रिके प्रम पनि हुन नपाकोमा चिन्ता होला?
सुजातालाई साँढे दिनेले अरुलाई के उपहार दियो होला...
यो रामदेवको पतन्जली योगपीठले पनि के के उपहार दिन्छ दिन्छ। सुजातालाई दुई थान उन्नत जातको साँढे उपहार दिनेले सुशील कोइरालालाई पनि केही उपहार दियो कि दिएन होला? यसो सोचिरा रामदेव बाबाले माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथलाई के के उपहार दिए होलान् कुन्नी? हिरोनी रेखा थापालाई के उपहार दिन्छ कुन्नी...दिमागमा चाहिने कुरा खेलेपो...
दाडि फुल्ने बेलासम्म पनि दाडि काट्न जानिएन...
दाडि फुल्ने बेला भइसक्दा पनि गतिलरी काट्न जानिएन। कहिले कतै छोडिन्छ कहिले कतै,लउ राम्ररी नै फालौं भन्यो भने कि गालातिर,कि च्यापुतिर कि घाँटीतिर काटिन्छ। अझ कुनै कार्यक्रम,मिटिङ सिटिङ तिर जान परेको दिन त अनाराँ खत नलिइकन हिड्नै नपाइने भो बा...(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
४० अर्बको सुन?सुनै खान्छन् कि के हो ?
हैन धनीमानीले सुनै खान्छन् कि के हो?गभर्नर युवराज खतिवडाले अन्तरवार्ताँ भने अन्सार त एकै वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको सुन आयाता भएछ...भाउ बढेको बढ्यै छ मान्छेले सुन किनेका किन्यै छन्। कहाँ गाछ हउ तेत्रो सुन। आफ्नो ल-सुन पनि किन्न नसक्ने अवस्था छ महंगीले...(हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा.....)
नेपालगन्जको स्विमिङ पुलले बाँचियो
धन्न नेपालगन्जको बाटिको होटलमा स्विमिङ पुल रहेछ। नत्र भा ४० डिग्री माथिको त्यो गर्मीमा पाकिन्थेन त भनेर एउटालाई भनेको बेकारमा मुख चिलाएर भनिएछ जस्तो गरायो। बाटिकामा नबस्ने नेपालगन्जका सबै पाकेका छन् र भनेर जवाफ पाइयो। बोल्दा होस पुर्याएकै राम्रो...तर स्विमिङ पुलले नै नेपालगन्ज यात्रा रमाइलो भा हो, जस्ले जे सुकै भनुन्...
नेपालाँ रेल दुर्घटना भर ८ जना मरे रे....
कुरा गम्भिर भर के गर्ने कोही - कोहीलाई सुनाको हाँसे। नेपालाँ पनि रेल दुर्घटना भर मान्छे मरेचन्। जयनगरबाट जनकपुर जाँदै गरेको रेललाई गिटी रोडा भारत पुर्याउने ट्रिपरले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भको खवर सुन्नमा आछ। संग्राहलयमा राख्न ठिक्क भाको नेपालको त्यही एउटा रेल पनि दुर्घटनाँ परेपछि नेताहरुले छुट्टै एक रेल मन्त्री पनि आवश्यक परो भनेर मन्त्रालय संख्या बढाउलान्।
पुलिसले अपहरण मुक्त गरा रे... हँसाउछ यार
फेरि हसायो यार पुलिसले। डाउटर भक्तमानलाई फिरौति लिएर हो कि नलिइकन अपहरणकारी(ठूला हुन्क कि साना दल)ले छोड्देछन् हिजो राति धादिङको जोगिमारा,मझीमटारमा ल्या'र। त्यसपछि उन्ले आफ्ना भाइ डीएसपी जगतमान श्रेष्ठलाई फोन गरेर लिन बोलाएछन्। अनि पुलिसका प्रवक्ता भन्नेले गफ दियाथे बिहान एफएमाँ...हामीले भक्तमानलाई अपराधीहरुबाट छुटायौं भनेर..
भक्तमानले सबै कुरा भन्लान् त ?
क्या दिन आए यार मान्छे अपहरण मागेर फिरौति लिनका लाइ नै पार्टी गठन हुन थालेछ। नेपाल हिन्दु जनता पार्टीले आफ्लाई अपहरण गरेको भक्तमान श्रेष्ठले बताएछन्। अपहरण गर्नेको वास्तविकता लुकाउन यो नयाँ पार्टीको जन्म गराइएको हो कि?
अरु कुराँ झगडा गरेपनि भक्तमान घर आएपछि सरकारवाला दल र माओवादीलाको मत एउटा कुरा मिलेछ। उनी फिरौति तिरेरै आएको दुइटैले बताइराका छन्। तर अलि अलि फरक पनि छन् यिन्का धारणा। सरकारवालाले माओवादी र केही आपराधिकको संलग्नतामा अपहरण भएको र पैसा बुझाएर छुटेको बताछन्। माओवादीले त एक करोड रुपैयाँ दिएरै छुटेको बताइरहेको छ। खोइ के खोइ के..
सबैकुरा प्रष्ट भन्दा भक्तमानलाई तत्काल अप्ठेरो पर्ने भए पनि उनले सबै कुरा पारदर्शी रुपमा भनिदिए भविष्यमा हुनसक्ने यस्तो संभावित घटनालाई रोक्न सहयोग पुग्थ्यो र अहिले पनि दोषिले सजाय पाउँथे कि। तर के गर्छन् कुन्नि...। देशाँ सरकार कम्जोर भाका बेलाँ सबै कुरा भन्न भक्तमान बा डराउने पो हुन् कि...
खोई कहिले हो नयाँ सरकार नयाँ संविधान
यस्तै चाललले हो भने माधव काम्रेडले राजिनामा दिन ३ महिना जति लगाउलान् जस्तो छ। अनि नयाँ सरकार, राष्ट्रिय सहमतिको सर्कार भनेपछि सबैलाई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनै परो त्यो बनाउन अरु ६ महिना लाग्ला। बाँकी तीन महिनाँ संविधान लेखेर सक्लान् त ? नसके नि के भो र हाम्ले फेरि समय थप्न पर्छ भनेर अनसन,धर्ना दिइहाल्छम के रे। फेरि एक वर्ष त थप्लान् त्यहाँ भन्दा धेरै त नथप्लान् नि....
पदक पार भोज खुवाउनेको के हाल होला?
सर्कार्ले फेरि अर्को विभुषण फिर्ता पाउँछ कि के हो? आजको 'नागरिक'मा सिंहको राशिफल यस्तो छ:भाग्योदयको योग रहेको हुँदा सरकारबाट मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग देखिन्छ। अब मेरो राशि सिंह नै हो। मैले पाएँ भने फिर्ता दिइहाल्छु। फिर्ता दिइएने भने त पुरै प्रतिगामीको सूचिमा परिने डरछ। क्या बोर भा होला है यसपटक पदक पाकालाई,दिन दिनै जसो कसै न कसैले फिर्ता गर्या गरैछन् हुँदा हुँदा अदालतले पनि वितरणमा रोक्न भन्दिओ। अझ कोही कोहीले त पदक पाएपछि भोज पनि खुवाथे होलान् अब तिन्ले के गर्लान्? ...(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
'अफिसमै झुपु झुपु'
'नखाइन्जेल लोत्र्यान खाएपछि सोत्र्यान'भन्ने ग्रुप पनि एउटा खोले हुन्थ्यो नि। अनेक अनेक नामका फेसबुक ग्रुप खुलेका छन्। असाध्यै गर्मी बढेर हो कि के हो 'अफिसमै झुपु झुपु' नामको ग्रुपको पनि खाँचो महसुस गरिरहेको छु। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
विदेशी सेना नहुल....
बैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सक्ने कुरा नि त्यस्तै त्यस्तै रहेछ। जापान जस्तो शक्तिशाली देशका प्रधानमन्त्री युकिओ हातोमायाले त आफ्नै भुमि अकिनावा टापुबाट अम्रिकी सेना हटाउन नसकेर ९ महिनैमा राजिनामा दिन पर्दोरहेछ। बल-बुद्धि धेरै भाका देशले थिच्ने रैछन्। एकचोटी विचार गरो है नेताहरु अरु जे सुकै गरे नि विदेशी सेनाँ चाहिँ देशाँ नहुल। जापान जस्तो देशका प्रधानमन्त्रीले त सैनिकलाई हटाउन नसक्दा रैछन् तिम्हर्ले एकपटक हुलेउ भने त तिम्रा बलबुताले हटाउन सक्दैनउ झैं माने मैले...
अलिकति हिड्न पाइयो अराजकताले गर्दा...
कस्तो अराजक बनाइदिए देश। बसुन्धाराट रिङरोड हुँदै सानेपा अफिस आउँदै थिए। बाफल तिर आएसी माइक्रो रोकियो। कुरो बुझ्दै जाँदा थाहा लाग्यो। कलकी नजिक बा ४ ख ११९० नम्बरको ट्रकले नम्बरप्लेट लेख्ने ठाउँमा स्टिकरमा नम्बर लेखेर टाँसेको भन्दै बुद्धिमान नाम गरेका ट्राफिक प्रहरीले पैसा मागे रे।
पैसा दिन नमानेसी चालकसँगट बिलबुक लिएर गइदिएछन्। उन्ले ट्रक बीचबाटाँ तेर्साइदिए। ट्राफिक हाकिम बिलबुक फिर्ता दिन त तयार भएछन्। तर चालक गाडी रोकेको ठाउँमै बिलबुक दिएमात्र गाडी चलाउने भन्दै अड्डी कसेर बसेका थिए। कति लामो समय जाम भो कुन्नी म त हिडेर बल्खु खसी बजार नजिक आएर अर्को गाडी चढी अफिस आइपुगे।
तर ठीकै छ। अलिकति भए पनि हिड्न पाइयो....
अहिल्यैट दबाब दिए पो हुन्थ्यो र...
मुलाई त सबभन्दा कम्जोरी हामीमै छ झैं लाउछ। संविधानसभाको म्याद थपेको साता दिनसम्म संविधानसभासँग सम्बन्धित सिन्को भाँचिएको छैन। अहिले चाहिँ चुप लार बस्ने। महिना डेड महिना बाँकी भएसी बेलाँ संविधान बनाउन पर्छ भनेर सभाध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिने अनि लास्ट दिनाँ घर धर्ना देको कत्ति चित्त बुझेन। अहिलेटै दबाब देपो हुन्छ र। खोई नयाँ कार्यतालिका योजना भनेर भोलिट संविधानसभा घेरेपो उन्हरुले पनि बेलाँ काम गर्छन्। लास्ट आओराँ गर करार के के न काम गरे जस्तो नगरम्न हउ...
प्रचण्डलाई थर्काको कुरा गरे एक माउवादी नेताले। पार्टीलाई प्रतिक्रान्तिकारीले जहिले नि पछारे,खोइ त माधव नेपालको राजिनामा भनेर प्रचण्डलाई सोध्या रे। प्रचण्डले केपी ओलीसँग जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भाको हो,पर्सीसम्म राजिनामा आउँछ भने रे। अनि उन्ले-जेन्टलमेनसँग र राजिनामा दिने जेन्टलमेन भए पो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट फलो हुन्छ भन्देछन। खोइ नेताहर्का भित्री कुरा; को जेन्टलमेन को अनजेन्टलमेन...
प्रचण्डको डेराँ बन्दुक पड्किएसी....
प्रचण्डको डेराँ मंगलबार दिउसो २ बजेतिर बन्दुक पड्कएछन् नि। मैले प्रचण्डलाई पहिल्यै भनेको यो बन्दुकको वरिपरि बस्न हुन्न भनेर... माने पो। उन्कै एक सेनाले लिएको बन्दुक भुइमा खसेर पड्कदाँ भित्ता र टिनमा अलिकति खत पनि लाछ रे। धन्न मान्छेलाई लाएन छ र पो... यस्तै बन्दुक खसेर कुनै‍ दिन मान्छेलाई लाओ भने राम राम... काम्रेड बन्दुक छोड्दिम भनेर कसैले भने नि माने पो...
पत्रकारलाई बैंकको ऋण छैन...
पत्रकार्ले विशेषगरी आर्थिक पत्रकारले था'नपार नलेखेका त होइनन् होला। नेपालका सबैजसो बैंकले संगठित रुपमा एउटा निर्णय गर्यारैछन्-पत्रकारलाई काठमाडौंआँ घर जग्गा किन्न ऋण नदिने। सायद अन्य शहराका पत्रकारको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय भा होला।
किन हो भनेर एउटा बैंङ्करलाई सोधेको नेपालाँ जागिर र तलब दुबै भर नभाको पेशाको कोटीमा छ रे पत्रकारिता...पत्रकार्ले थाहा पाइ पाइ पनि आफ्नै उछितो के काट्नु भनेर नलेख्या होलान्। नत्र तिनै बैंकको सँधै जसो गुणगान गार मात्र बस्ने पत्रकारहरुले आफूहरु माथि संगठित हमला गर्ने बैंकलाई के छोड्थे होलान् र?
कटवाललाई पदक नदेर हाम्लाई दिन्छ त?
रुक्माङ्गत कटवाललाई गणतन्त्र दिवसमा यो सर्कार्ले पदक देकोमा रिसाउनेहरुदेखि कत्ति चित्त बुझ्याछैन। कटवाल प्रकरणले नै माधव सरकार बनेको भन्ने कस्तो नबुझेको। प्रचण्डले कटवाल हटाउन नखोज्या भए माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना त पहिलेजस्तै भ्रुण हत्या हुन्थ्यो नि। आफ्नो सरकार बनाउन विर्यदान गर्ने हिरोलाई पदक नदिएर तिमी-हाम्लाई दिन्छ त ?कुरै नबुझी विरोध यार (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)